अध्ययनले भन्छ-मास्कले भ्याक्सिनकै काम गर्न सक्छ,मास्ककाे भरमा काराेना जित्ने देशहरूकाे लामै लिस्ट « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2020 September 22, 4:13 pm
एक समय थियो, जब जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुर जस्ता देशहरुमा संक्रमणका मामलाहरु अधिक तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो, तर उनीहरुले बिना भ्याक्सिन भाइरसमाथि रोक लगाइदिए र कोरोना फैलने गतिलाई अधिक सुस्त बनाइदिए । यि देशहरुमा भाइरस कसरी नियन्त्रण भयो त?
मास्कबाट भयो सबै सम्भव
भ्याक्सिनले जस्तै काम गर्छ मास्क
के एन–९५ मास्क सुरक्षित छ?
कुन मास्क सुरक्षित?
विशेषज्ञहरुका अनुसार, सूतीको कपडाबाट बनेको मास्क संक्रमणको खतराबाट बच्नका लागि सबैभन्दा अधिक प्रभावकारी हुन्छ । यसलाई तपाईले घरमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ वा बाहिर बजारबाट पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपी केही किन्नुभन्दा पहिले सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।-मेरोलगानी/Photo: Agency